သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ Alanya စာရင်းစစ် Make ခဲ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 Antalyaသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ Alanya ထိန်းချုပ်ရေး Make ခဲ့သည်
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
စောင့်ကြည့်စာရင်းစစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး alanyada ၏အမှုကိုပြု
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Surveillance, Alanya ပုံမှန်စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် Alanya ရဲဌာနယာဉ်အသွားအလာဌာနခွဲစာရင်းစစ် Alanya အမျိုးမျိုးအချက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများနှင့်အငှားယာဉ်များသည်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာရပ်တန့်, အလုပ်စာရွက်စာတမ်းများ, ယေဘုယျစာရွက်စာတမ်းများ, စားဆင်ယင်၏ယာဉ်မောင်း, In-ကားတစ်စီးလေအေးပေးစက်နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စာရင်းစစ်ဆေး။
ပို့ဆောင်ရေးရဲနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးခြင်းဟာအသွားအလာချိုးဖောက်တှငျတှေ့သူတို့၏အမျိုးအပိုလျှံထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်မှ Alanya ၏အနောက်ဘက်ဒေသအတွက်စာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်စားဆင်ယင်သင့်လျော်သတိပေးမပါဘဲဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုများနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူလိုက်လျော 15 tools များလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လုပ်မခံခဲ့ရပါ။
Bursa အတွက်ယာဉ်ထိန်းရဲ၏မော်တော်ထိန်းချုပ်ရေး 07 / 10 / 2017 ထိုကဲ့သို့သော breathable မြို့ပြယာဉ်ကြော Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်လမ်းများ, တံတားများနှင့်လမ်းဆုံအသစ်သောရထားလမ်းများနှင့်ဝါယာကြိုးစနစ်က, အထူးသဖြင့်အဓိကလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာဆုံးမသောနှင့်စီးဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်ထိန်းရဲကိုသက်ဝင်ရန်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, ယူခံရဖို့ Gorukle အကြားအဓိကလမ်းကြောင်းအပေါ်5Kestel ရဲတပ်ဖွဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်သောအရေအတွက်ကတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက် xnumx'y ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် 15 အဆက်မပြတ်ကင်းလှည့်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ယခုကဆိုသည်။ တစ်မြို့ရထားလမ်းစနစ်ကဖြစ်လာ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ Bursa အားလုံးဒေသများ, မြို့ပြကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများ, တံတားများနှင့် Interchange အတွက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်သစ်လမ်းများနှင့်လမ်းအလုပ်ခွံ့ပြုသည်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သောလျှင်မြန်စွာဆက်လက် ...
IMM E5, E6 နှင့်ကားဆွဲလုပ်ငန်းအတွက် Bridges ကနေရဲတပ်ဖွဲ့ 09 / 01 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန, E5, E6 တံတားများကျော်နှင့်ကြောင့်မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ပျက်ပြား bulunarak ချက်ချင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှလမ်းများတွင်ကျန်ရှိသည့်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်စေအခမဲ့ Off-လမ်းကားဆွဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်အသွားအလာဌာနခွဲတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အသွားအလာမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်အမှားနှင့်အတူအဖွဲ့များယာဉ်ပေါ် E5, E6 ဖြစ်ပေါ်ချပိုပြီးနှေးကွေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် Off-လမ်းကားဆွဲဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်အတွင်းတူညီလိုင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်သောအရင်းနှီးဆုံးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဧရိယာ၏လွှတ်ပေးရန်သေချာစေရန်တံတားယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှုအတွက်လမ်းမပေါ်တွင်တည်းခို, 16 ဆွဲဆောင်မှုစုစုပေါင်းနှင့်အတူရိန်းမှ622 ကိရိယာများနှင့် ...
Kocaeli ရဲလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အစီအမံယူပြီးနေကြတယ် 01 / 04 / 2016 Kocaeli ရဲလမ်းရထားလိုင်းများအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အစီအမံယူပြီးနေကြသည်: မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အဆိုပါလမ်းရထားအလုပ်ကိုအသွားအလာ၏စီးဆင်းမှုကိုစည်းရုံးရေးရှိရာအချက်များမှာထွက်သယ်ဆောင်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကဓါတ်ရထားစီမံကိန်းတမြို့လုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များထွက်သယ်ဆောင်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် superstructure အလုပ်နှင့်အတူလျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်အရှိန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းခရီး၌ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအလုပ်နှင့်တိကျသောအစီအမံများအရပျမှလမ်းပေါ်ဟာအသွားအလာစီးဆင်းမှုပြဿနာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အသင်းများကိုမပြတ်မတောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုနိုင်ငံသားများရဲ့အဖွဲ့ 30 ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အလုပ်လုပ်ပါပြီ။ သာ. ကြီးမြတ်သည့်မြူနီစီပယ်ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်; ပေါ်လာတာဟာအရင်အတူ terminal ကို၏ဘေးကင်းစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်ရဲအချင်းချင်းအဖွဲ့များ Sekapark တစ်ရက်အကြားအသွားအလာစီးဆင်းမှုရှည်လျားနာရီသုံးစွဲအစေခံပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော် ...
IMM, Metrobus မတော်တဆမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ Hasan Kaya အကြားတစ်ဦး Chase (ဗီဒီယို) ပေးခြင်းမရှိပေ 11 / 04 / 2016 ရှင်းပြချက်ကိုပြု၏ "ဟုအယောင်ဆောင်ပြီးအဖြစ် Metrobus လမ်းကြောင်းစွပ်စွဲကွယ်လွန်သွားဝင်များ၏ Chase ရလဒ်အသက်ရှင်ရန် Hasan Kaya zabıtayl" မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူရောင်းချသူနယျလှညျ့၏ထိတ်လန့်ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. IMM, Metrobus: IMM, Metrobus ရဲနှင့် Hasan Kaya မတော်တဆမှုများအကြားတစ်ဦး Chase တွေ့ကြုံမရှိသေးပါဘူး။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ရှင်းပြချက်ကိုပြု၏ "ဟုအယောင်ဆောင်ပြီးအဖြစ် Metrobus လမ်းကြောင်းစွပ်စွဲကွယ်လွန်သွားဝင်များ၏ Chase ရလဒ်အသက်ရှင်ရန် Hasan Kaya zabıtayl" မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးသူကိုကွာနယျလှညျ့မနေ့က Metrobus ထိတ်လန့်ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် "ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ 8 2016 ဧပြီလမှာတော့သောကြာနေ့ညဦးယံအချိန် peddlers Hasan Kaya Eyup D-100 ... : အဖြစ်အပျက် IMM လည်းပုံရိပ်တွေယခုအချိန်တွင်ဝေမျှသူသည်အောက်ပါကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း
Bursada ရဲအတားအဆီးdolmuşçu 27 / 09 / 2016 Bursa ခုနှစ်တွင် Bursa အတွက်Dolmuşçuရဲအတားအဆီး T-1 running အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုရန်အပြိုင်နှင့်မီနီဘတ်စ်တက္ကစီ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာမှအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူမီနီဘတ်စ်တက္ကစီလိုင်စင်ပန်းကန်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၏ status Dolmuşçu, အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံး application ကိုအပေါ်သို့ ယူ. သေဒဏ်စီရင်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါမီနီဘတ်စ်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများ၏ကန့်ကွက်နေသော်လည်းအဆိုပါစည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခဲ့သည်ကားပန်းခြံဆွဲယူလာရသည်ဟု။ အပြိုင် D-ချထားတဲ့ 1 အတွက် operating T-36 လမ်းရထားလိုင်းကိုဗဟိုဂိုဒေါင်ပန်းပုလိုင်း၏ဗဟို Osmangazi ခရိုင်ကုန်ဆုံးသည့် D ပြားဆုံးဖြတ်ချက်များ '' T က '' နှင့်အတူတက္ကစီ status ကိုတပ်ဆင်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာမှအဆိုပါပန်းကန်ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ တရားရုံးမောင်းနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများတွင်၏သိမ်းယူခြင်းချင်သောသူတို့အားအယူခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက် ...
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Surveillance
Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Surveillance
IMM E5, E6 နှင့်ကားဆွဲလုပ်ငန်းအတွက် Bridges ကနေရဲတပ်ဖွဲ့
IMM, Metrobus မတော်တဆမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ Hasan Kaya အကြားတစ်ဦး Chase (ဗီဒီယို) ပေးခြင်းမရှိပေ
ရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့များ Siirt အတွက်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Check ခဲ့ကြသည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2006 12 1 သုတေသနဧရိယာသမ္မတနိုင်ငံမှုဆောငျလုပျငနျး: ရထားပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းမျှ: 2
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2006 13 1 သုတေသနဧရိယာသမ္မတနိုင်ငံမှုဆောငျလုပျငနျး: ရထားပို့ဆောင်ရေး (အဆက်) Project မှအဘယ်သူမျှမ: 2
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစားပွဲတင် 2006 14-1 သုတေသနဧရိယာသမ္မတနိုင်ငံမှုဆောငျလုပျငနျး: ရထားပို့ဆောင်ရေး (အဆက်) Project မှအဘယ်သူမျှမ: 3